May Thagyan Hein – ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို …ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
by May Thingyan Hein on Wednesday, 13 June 2012 at 14:31 ·
ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၂၊ ရန်ကုန်မြို့။ (Repost from Writer’s Facebook)
(ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာဟာ ဘယ်လောက်ကြီးမားနိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ အဆက်ပါ၊ ပထမပိုင်း မဖတ်ရသေးရင် ဒီမှာ မှာဖတ်လို့ရပါတယ်။
ဖဆပလအစိုးရအနေနဲ့ ထိုအချိန်က မဲအနိုင်ရရှိရေးအတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဦးဧမောင်(ခ)အဒူလာဒစ်ရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ ဘင်္ဂါလီများကို ခေါ်သွင်းလာခဲ့ပြီး ဘူးသီးတောင်ဒေသမှာ အဘူခိုင်ဆိုသူက ဖဆပလဥက္ကဌ၊ လ၀က တို့နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ဘင်္ဂါလီများကို မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခြင်းပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းများပြုလုပ်ပေးခြင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိခဲ့ရပါတယ်။
အင်အား ၁၅၀၀၀ (တစ်သောင်းခွဲ) ခန့်ရှိသော ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီများသည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ စစ်ဆင်ရေးများမှ လွတ်မြောက်ရန် ဘင်္ဂါလီတို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲသို့ ပြန်လည်ပုန်းခိုကြသပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာလည်း အထူးစစ်ဆင်ရေးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီ ၂၀၀၀၀၀ (၂သိန်း) ခန့်ကိဘင်္ဂလားးဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးများကို “ဘ၈င်္ါလီအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး” ဟူသာလူသိများပြီး အစိုးရကိုလည်း နိုင်ငံတကာကရှုံ့ချခြင်း ခံခဲ့ရကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)) နှင့် ဆွေးနွေးမှုများအရ နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်ဂါလီများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် နေထိုင်ရန်ပြန်လည်လက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်စစ်ဆင်ရေးအပြီးမှာလည်းရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီ စုစုပေါင်း ၂၅၀၀၀၀ (၂သိန်းခွဲ) ခန့်ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရာမ၀င် ၀င်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေးကြောင့် မြန်မာအစိုးရကို အာဆီယံနိုင်ငံများအဖွဲ့မှ မူဆလင်နိုင်ငံများနှင့်အတူ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမူဆလင်နိုင်ငံများ ၊ မကာအခြေစိုက် မူဆလင်အဖွဲ့အစည်း (Rabita-al-Alam-I-Islami (Muslim World League)) တို့ရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဖိအားပေးမှုများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသုတေသနမှတ်တမ်း၊မော်ကွန်းဌာနမှ မှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီတို့အနေနဲ့ မေလ ၁၃ ရက်နေ့ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မောင်တောဒေသက ရခိုင်များကို နှိမ်နင်းနိုင်သောနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၁၉၈၈ခုနှစ်မေလ ၁၃ ရက်နေ့ည ၉နာရီအချိန်မှာ မောင်းတောမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်မြို့သစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကို စတင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ၊ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက်ခြင်းစတဲ့ ဆူပူလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစုရဲ့ မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားချက်အရသိရပါတယ်။
အဆိုပါ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုမှာလည်း မောင်တောမှဘင်္ဂါလီခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာထွန်းအောင်(အဒူလောက်)နဲ့စစ်တွေမြို့မှ ဘင်္ဂါလီရှေ့နေ ရွှေမောင်ဆိုသူကလည်း ဘင်္ဂါလီတို့မှာရိုဟင်ဂျာများဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်သို့ ၀င်ရောက်လာသည်မှာ အေဒီ ၆၈၀ ခန့်ကပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခွင့်အရေးရလျှင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် တန်တူရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
”ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိဘူး။ ရခိုင်၊ မြို၊ ခမီ၊ ကမန်၊ သက်၊ ဒိုင်းနက်၊ မရမာကြီး ဆိုပြီး ရခိုင်လူမျိုး ခုနစ်မျိုးရှိတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တစ်ဖက်နိုင်ငံက တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားလူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို အမေရိကန် သံရုံးကရော၊ အမေရိကန် အစိုးရကရော သိဖို့ လိုတယ်။ ပြီးတော့ စဉ်းစားပါလို့ ပြောလိုတယ်။ ဒါကို ပြောချင်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလို့ ပြောပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရ ဖန်တီးနေတာသည် ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်ဖို့ ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖို့ ဖန်တီးနေတာ ဖြစ်တယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ခိုးဝင်လာပေမယ့် ရခိုင်တွေက သည်းခံနေတယ်။ လက်ခံကြတယ်။ အတူတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေကြတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ပေးထားတယ်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်း သားဆိုပြီး လှုံ့ဆော်မှုမျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ အခု မီးလောင်သွားတဲ့အိမ်တွေမှာ ရခိုင်အိမ်တွေက အများဆုံးပဲ။ ဒါတွေကို ဘင်္ဂါလီတွေ ခံရတယ်ဆိုတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ ရခိုင်တွေ သေတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေ ပြောင်းလာခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီရွာတွေဟာ ဘင်္ဂါလီရွာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ကြိုတင်ပြီး ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး ဒါကို ကမ္ဘာက သိဖို့လိုတယ်။ အမှန်သိမှ ဖြစ်မယ်”လို့ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဦးအေးသာအောင်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ ခုလို သုံသပ်ပြောဆိုပါတယ်။
D264 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနုစု
D272 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနုစု
D1313 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု၊ ၁၉၈၈
D1315 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနုစု
D1316 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနုစု
D1318 သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနု
DR491(56)၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု
MF-962၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု
OH/P/ 0354/2009၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု
OH/P/ 0355/2009၊တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု
OH/P/ 0356/2009၊တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မော်ကွန်းဌာနစု
ရခိုင်ဒေသတွင်းသို့ မွတ်ဆလင်များ ၀င်ရောက်လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု အဆင့်ဆင့်၊ သမိုင်သုတေသနဦးစီးဌာန။ ၂၀၀၉-မတ်လ။
ခင်ကြီးဖျော်၊ ရခိုင်ပြည်မှမူဂျာဟိန်းဟူသည်၊ ရခိုင်တန်ဆောင်၊ အတွဲ – ၁၊ အမှတ် – ၈ ၊ ၁၉၅၉-၆၀
စံထွန်းအောင်ဦးကိုယ်တွေ့ မေယုနှင့် ရိုဟင်ဂျာ၊ (လက်နှိပ်စာမူ) စံသာအောင်၊ ဦးအာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာ
စန္ဒမာလာလင်္ကာရ၊ ရခိုင်ရာဇာဝင်သစ်၊ (ပ) တွဲ၊ ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၃၁ ဇော်မင်းထွဋ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်
၁၉၉၉ ပဏ္ဍိ၊ဦးဓည၀တီရာဇ၀င်သစ်၊ ပြည်မကြီးမဏ္ဍိုင် ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၁၀ ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ လက်နှိပ်စက်စာမူ
ဖော်ဇံ၊ `ရခိုင်နယ်စပ်မှ ဗိုလ်ချင်းပျံ၊ ဓည၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ နှစ်လည်(၁၉၅၂ – ၅၃)
ဘုံပေါက်သာကျော်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘဂါင်္လီများပြဿနာစာတမ်း၊ ၁၉၈၉ ၊ လက်နှိပ်စာမူ၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန၊
၊၂၈-၂-၂၀၀၈ မောင်တောမြို့နယ် အနာဂတ် သာသနာတော်အရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်တင်ပြလျှောက်ထားချက်၊ ၂၈-၉-၁၉၈၈
(photo – Shwe Myit Ma Kha Newsgroup)
7 Responses to May Thagyan Hein – ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို …ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ
mya on June 14, 2012 at 5:36 pm
In my heart I am truly sorry for the people who suffered in this riots, I wish these rohingar muslim were Buddhists, they won’t be alot of conflicts for Rakaine and Burmese people, I am thinking of them many timesaday, seen their photo, my eyes are wet, my chest are painful, I am also think of how was Indonisia, Malaysia and Singapore became muslim countries, Those countries were Buddhisam countries many many years agto, I think everyone know how those buddhistm countries transformed into Muslim countries.
I am burmese, I love Burma, I want my country always to be buddhisiam country. This is all I can say, My chest is painful, my eyes are wet, But I want to beaBuddhist again if I were reborned as human in future life. sad … mya
Mon on June 14, 2012 at 7:49 pm
It is true that the world gets wrong information and news based on which they claim that Burma is rough on Rohingyas (Bangalis) who were never be part of Burmese minority. We all must handle this seriously asanational issue. Bangalis were from Bangledesh which has no space, so they came to invade and settle in Rhakine state. Burma has put up with them for ages, but they never recognise our help and they terrorize local enthnic Rhakhine who were murdered by them. In this latest crisis alone, many Rhakhine housese were destroyed by Bangalis. They robbed Rhakhine people’s property in due course of riots. Bangalis have been lucky to be able to exploit the status duo of Burma’s political unrest for ages. If there isastable and good relationship between the Burmese government and the Burmese enthic people, Bangalis cannot become that much portion of the population on Burma’s soil. The most important thing is that all Burmese and its minorities have to be united to protect not to be swallowed by these Banglis. The terrorist group, Al Queda has already threatened Burma to accept these Bangalis and if not, they will terrorize Burma…..
Crystal Vision. on June 14, 2012 at 7:59 pm
Please note that,other Muslims are totally ,nothing concern (or) not Bengali Blooded.100% different race,but, Muslims. Mostly in Lower part of Burma,like Mergui,Tavoy,the native Burmese Muslims even hates them. Don’t mix up all, please think and consider carefully that, this problem,could dis effect to other Race ,but, Religion is Islam. Only there are3to4Big Religion in the World.Please think of Kaman Muslim,who are not Rohinja Blood,they have been staying in hundreds of years in that region, Rakhine,from the long ancient Rakhine Kings’ time,as the Royal Archers,servicemen.Because of hatred don’t try to mix it up,with other Race but, same religion.For example…The Americans Bombed the atomic Nuclear at Nagasaki and Hiroshima,millions of Japanese died,but, can the remaining Japanese,Kill,all the other Japanese Christians ? But,many people does not understand,so, this kind of article,can cause problem for other same Race,because of now,many people encourage to each other by False Face Book propaganda.
aung zaw on June 15, 2012 at 9:35 am
Regarding Rohingya or illegal bangledeshi people, for example, many burmese flee to neighbouring Thailand since 1947 since commencement of civil war, what Thailand
did, they set up refugee camps along borders, now 2012, already 60 years over, Thailand
wl not accept these refugess as thai citizen , no matter how long they stay in Thailand. Did these refugees entitled to equal standards with thai peoples? They even cannot attend to thai hospital, let alone be school or other social welfares. Well, what thai governments
did were absolutely correct, they are defending their peoples fm illegal immigrants. Thailand have2million or more burmese , if these burmese rioted like rohingya in our
county , what thai government wl do. See it urself. what is the solution for rohingyas
terrorist. what we wl do , which shall be lead by Rakhine leaders.
Mon on June 15, 2012 at 5:51 pm
Thank you, Aung Zaw foragreat example of comparison which is also true!!!!!!
Nyi Lay Maung on June 16, 2012 at 3:21 am
AFPFL Minister Abdul Latiff’s Burmese name was U Khin Maung Latt and NOT U E Maung. There was one Minister called Dr. E Maung in Clean AFPFL Government (9th June 1958 – September 1958) and April 1960-1st March 1962. He wasapure Burmese Buddhist andaLawyer.
Moe Min on June 17, 2012 at 1:47 am
သတင်းစါ ဂျာနယ် တွေမှာ ဖေါ်ပြသင့်ပါတယ်။အါးလုံးဝိုင်း ရှယ်ပေးကြပါ။